fizahan-tany sy fizahan-tany | Fampahalalana mahasoa ho an'ny rehetra.
Topic: fitetezana sy fizahan-tany
Ny fialantsasatra manintona indrindra eto an-tany
Fantatrao ve fa ny fialantsasatra dia mahafinaritra fotsiny? Betsaka ny fombafomba mahatsiravina ary mahatsiravina aza saika manerana ny firenena rehetra eto an-tany!
I Torkia dia firenena eo amin'ny fihaonan'ireo kaontinanta roa
Torkia amin'ny mason'ny mpizahatany dia morontsiraka mahafinaritra sy tendrombohitra avo, Istanbul mahavariana ary sisan'ny sivilizasiôna taloha. Izy io koa dia manana sakafo mahavariana, moske tsara tarehy ary bazaar kely eo an-toerana ary harambato mahafinaritra any Cappadocia.
Fety any Espaina
Izay mitsidika toeram-pialan-tsambo malaza eran-tany, tsy isalasalana fa tsy mandingana firenena mahavariana toa an'i Espana. Ny fialan-tsasatra eto amin'ity zoroan'izao tontolo izao ity dia midika hoe fialantsasatra mihaja! Ity firenena ...
Ny fijerena ny fiaramanidina Boeing 737-800
Iray amin'ireo zotram-piaramanidina be mpampiasa indrindra amin'ny zotra fohy sy antonony ataon'ny mpitatitra maro manerantany, anisan'izany i Russia, ny Boeing 737-800. Hevitra nataon'ny manam-pahaizana ...
Ny Ranomasina Maintina any Sina. Ranomasina mavo ao amin'ny sarintany
Antsoy ny Sinoa hoe Huanghai ny Ranomasina Mavo. Io dia an'ny fantson'ny ranomasina lehibe indrindra eto an-tany - Pasifika. Ity ranomasina, manana anarana hafahafa ity, dia miorina eo atsinanan'ny moron'ny kaontinanta Eurasia, nosasan'ny tandrefana ...
Aiza ianao no afaka miala sasatra amin'ny fahavaratra amin'ny ankizy sy amin'ny ankizy
Aiza no ahafahanao miala sasatra amin'ny fahavaratra amin'ny vidiny lafo. Ny ray aman-dreny tsirairay avy dia tokony hanao ny ezaka rehetra hahazoana antoka fa hitsidika ny ranomasina ny zanany amin'ny fahavaratra. Tsy mila manana kitapom-batsy matavy sy big ...
Ny mponin'i Saratov. Mponin'i Saratov
Saratov dia tanàna lehibe eo amoron'ny fitahirizana Volgograd, ivon'ny faritra misy an'io anarana io ihany. Iray amin'ireo ivon-toekarena, toekarena ary fanabeazana manan-danja indrindra amin'ny faritra Volga. Ny lohahevitra lehibe amin'ity lahatsoratra ity dia ny mponina ao Saratov. Firy ny olona miaina ...
Fiantsonan'i Yekaterinburg: adiresy, toro-lalana
Yekaterinburg no renivohitry ny Ural. Iray amin'ireo tanàna rosiana lehibe indrindra. Io no sisin-tany manasaraka an'i Eropa sy i Azia, ary afaka mifaninana mora foana amin'ireo megacities lehibe indrindra eran'izao tontolo izao. Miroso hatrany ny fiainana eto, ...
Trano fahiny tany Ukraine. Tranon-tsambo sy trano mimanda any Ukraine
Ny trano mimanda dia trano efa antitra izay niasa ho toy ny trano mimanda an'ny mpanjaka feudal. Matetika izy io dia kompana lehibe iray ahitana trano ilaina, trano sy fiarovana. Castles of Ukraine avy tamin'ny taonjato faha-11 ka hatramin'ny faha-19 tany Ukraine ...
Aiza no handehanana any Krasnoyarsk ho an'ny mpizahatany: lisitry ny mahaliana ny tanàna
Krasnoyarsk dia iray amin'ireo tanàna lehibe indrindra any Siberia. Any amin'ny lafiny roa amin'ny renirano Yenisei no misy azy, izay manasaraka ny tanàna amin'ny distrika maro: banky ankavia sy banky ankavanana. Samy manana ny mampiavaka azy ...
Ny Mekong dia ony any Vietnam. Toerana jeografika, famaritana ary sarin'ny renirano Mekong
Ny Mekong dia renirano iray misy loharano ao amin'ny faritra atsimo amin'ny Tibet Plateau, manokana eo amin'ny tampon'ny Tangla. Io no fikorianan'ny rano lehibe indrindra ao amin'ny Saikinosy Indochina, atsimo atsinanan'i Azia, ary ny fahefatra lehibe indrindra ...
Hotel "Montenegro", Montenegro, Budvanska Riviera, Becici: hevitra. Montenegro Beach Resort 4 *
Montenegro dia toerana fialantsasatra ankafizin'ny mpizahatany eto amintsika. Mikaroka traikefa vaovao, tonga eto ny mpandeha, reraky ny toeram-pialan-tsasatr'i Torkia na Egypt. Ny toeram-pialantsasatra ao Montenegro dia tian'ny serivisy voalohany, ny ranomasina madio indrindra ...
"Sandy Bay", Sevastopol: famaritana sy hevitra
Aiza no ahitana toerana any Crimea hanaovana fialantsasatra ho an'ny fianakaviana na orinasa mahafinaritra? Manolotra anao ny sainao ny paositry ny kolontsaina sy fialamboly Pesochnaya Bukhta. Sevastopol, tanàna misy ity trano fandraisam-bahiny ity, hisokatra ho anao ...
Sumy faritra: vohitra, distrika, tanàna. Trostyanets, Akhtyrka, faritra Sumy
Ny tantaran'ny faritra dia manan-karena amin'ny hetsika isan-karazany izay manova tanteraka ny fiainan'ny olom-pireneny. Ny faritra Sumy koa dia mitazona fahatsiarovana zavatra mahaliana maro izay nitranga tamin'ny faritaniny hatramin'ny vanim-potoana Bronze ...
Fandriana Kaluga: adiresy, sary, hevitra
Indraindray dia tsy mahomby ny vatan'olombelona ary raha te ho sitrana tanteraka dia mila miala sasatra sy miala sasatra fotsiny. Ary ny fomba tsara indrindra hahatratrarana io karazana fialantsasatra io dia ny fitsidihana trano fandroana na sauna. Soa ...
Tranok'i Stalin any Abkhazia: sary sy hevitra
Ny namana Stalin dia toetra iray nidina teo amin'ny tantaran'izao tontolo izao ho iray amin'ireo ohatra ny habibiana, famoretana ary famonoana olona marobe. Marina, noho izy, ny olombelona dia afaka nanakana an'i Hitler sy ny fasista. Na dia izy ...
Hotel Welcome Jomtien Beach Place 3 * (Pattaya, Thailand): famaritana, sary ary hevitra
Betsaka ny olona no mihevitra fa amin'ny fahavaratra ihany no misy ny fialantsasatra amoron-dranomasina. Fa na dia ny fialan-tsasatry ny ririnina aza dia tsy antony handavana ny tenanao tsy hanana fotoana tsara tarehy hahazoana tanka sy milomano ao anaty ranomasina mafana sy malefaka. Tena tsara ...
Hotel "Scandinavia" (Sestroretsk): adiresy, hevitra
Raha efa ela ianao no te hiala sasatra amin'ny korontana sy ny fikorontanan'ny tanàna ary manahirana miasa, mankanesa any amin'ny hotely "Scandinavia". Sestroretsk miaraka amin'ny rivotra madio sy ny natiora mahafinaritra dia iray amin'ireo safidy tsara indrindra ho an'ny ...
Hotel Linda Seaview Hotel 4 * (Hainan, Sina): famaritana, serivisy, sary ary hevitra
Hainan dia nosy sinoa miorina amin'ny latitude tropika any atsimon'ny firenena. "Hawaii Atsinanana" no iantsoana azy. Androany, tsy misy fanitarana, io no toeram-pialofana malaza indrindra amin'ny Fanjakana Afovoany. Raha ny fanazavana, nitombo izany tato ho ato ...
Metro "Vyborgskaya": tantara sy androntsika
Tamin'ny taona 1975, nosokafana ny tobin'ny metro Vyborgskaya tao amin'ny distrikan'i St. Petersburg manan-tantara, antsoina hoe Vyborgskaya Storona. Na eo aza ny zava-misy fa tsy misy famaranana mahafinaritra ny lobby ao aminy, toy ny tranohevan'ilay voalohany ...
pejy 1 pejy 2 ... pejy 379 Next Page
55 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 1,521.